Malunga nathi-Hebei Pukang Medical Equipment Co, Ltd.
I-Hebei Pukang Medical Equipment Co, Ltd. yasekwa ngonyaka ka-1996, njengeshishini elincinci elinemali ebhalisiweyo eyi-RMB 500,000, indawo yomgangatho we-16.3 mu kunye nabasebenzi abambalwa nje ekuqaleni kwayo. Kule mihla, inkampani ikhethekile kwimveliso yokunyanga iibhedi zonyango, ifanitshala yezonyango, izixhobo ezibomvu zokunyanga kunye nezinye iimveliso ezibhalisiweyo, zine-RMB eyi-120 yezigidi, indawo yomgangatho we-180 mu, indawo yokwakha engama-92,000 eemitha, kubasebenzi abangaphezu kwama-580 kunye Iziphumo zonyaka zeeyunithi ezingama-200,000 (iziqwenga).
Inkampani idlulise isiqinisekiso senkqubo esemgangathweni ye-ISO 9001, isatifikethi somgangatho we-ISO 13485, isatifikethi se-EU, isatifikethi se-US FDA, isiqinisekiso se-ISO 14001 senkqubo yolawulo lokusingqongileyo, isiqinisekiso se-OHSAS 18001 sesetifikethi sempilo kunye nesetifikethi solawulo lokhuseleko, sisebenza njengesixhobo seUnited Nations ' kunye nomthengisi okhethiweyo waseTshayina wokuphelisa intlupheko kunye nezixhobo zonyango zobunjineli. Uphawu lwentengiso "olukunye nomongikazi" lalinganiswa "njengeHhebhe abadumileyo uphawu lwentengiso" kwaye imveliso yalinganiswa njenge "Hebei Famous Brand Product", yaphumelela imbasa engaphezu kwamashumi amathathu anikwa imbasa yesizwe, yephondo, kamasipala kunye namanye amasebe.
Inkampani okwangoku inezixhobo eziphezulu zokuvelisa, ezifana nomatshini wokusika i-laser ovela eJamani, iziko lemishini yokwenza izinto kunye ne-milling (USA), irobhothi yokungenisa impahla evela eJapan, umatshini wokusika ityhubhu ye-laser, umgca wokudibana kwe-Sino-US ngaphandle.
Okwangoku, inkampani iyabakhenketha iqela lobuchwephesha bobuchwephesha koomatshini, izixhobo zombane, uyilo lwembonakalo, njl njl, i-R&D ezimeleyo yeemveliso ezahlukeneyo zononophelo lwezempilo kunye namandla apheleleyo okuxhobisa izibhedlele kuwo onke amanqanaba. Inkampani iphumelele ngaphezulu kwe-100 yemveliso yamalungelo awodwa, idlale indima ekhokelayo kushishino olufanayo kwilizwe lonke, yanikwa izihloko ze “Ziko lobugcisa” lephondo, “Ishishini lobuchwepheshe obuphezulu”, “iSayensi kunye neTekhnoloji yeTekhnoloji”, kwaye igcinwe ixesha elide. Utshintshiselwano lobugcisa, ukusebenzisana kwabasebenzi kunye nolunye intsebenziswano neTianjin University, kunye neTekhnoloji yeBeijing kunye neYunivesithi yeShishini. Ngo-2017, inkampani yatyikitya isivumelwano sobambiswano kunye neBeijing Aerospace Long March Launch Vehicle Technology Co, Ltd., ephawula inyathelo eliqingqiweyo nelinoqilima lokudibanisa indibaniselwano yonyango kwitekhnoloji ye-aerospace.
Ukusukela "Umongikazi omncinci"Ibhedi yabongikazi eyenzelwa umsebenzi yaphehlelelwa ngo-1997, inkampani yaqhubela phambili ukuphucula imveliso kwizizukulwane ezisixhenxe, yafumana amabhaso amaninzi, ngokubakho kwamashishini kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla eYurophu, Asia, Afrika naseMelika, yaseka ubudlelwane bexesha elide kunye amakhulukhulu amabakala eBakala lesi-III kwiZibhedlele kwilizwe liphela. Okwangoku, ngeenjongo zokusebenzela abathengi abangcono, inkampani iseke iiofisi kunye neendawo ezithengisa emva kwentengiso kumaphondo amaTshayina angama-20.
Inkampani iyakubambelela kunyanzeliso lweemveliso zonyango njengembophelelo yayo, ukukhusela impilo njongo yayo, nokwakha ishishini njengekhulu njongo yayo, ukukhulisa amandla eqela nokufaka igalelo lethu kuphuhliso lmveliso yezixhobo zonyango ngokusekwe kulawulo lwenzululwazi nolusebenzayo .